Trainer Archives - Glory Assumption Space
Trainer- Male (5) Posts
3. Trainer- Male (5) Posts/Salary- 350,000 Kyats (Negotiable) /Bahan Township. - Any Graduate. - Age 20 and Above - Must have (1) year and above experience in related field. - Must be proactive and have good presentation skills. - Must have willingness to learn and share. - Must have strong interest in teaching. - Must have high tolerance level and able to work under pressure. - Highly computer literate with in-depth knowledge of MS Office (Word, Excel and PowerPoint). - Must have average level of English (4) Skills. - Must have fair knowledge of current and update technologies.
Trainer - Female (5) Posts
- ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။ - English 4skills ရရမည်။ - အတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။ -လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ရုပ်ရှည်ပြေဖြစ်ရမည်။
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗဟန်း မြို့နယ် တွင်ရှိသော Companyကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Trainer (M 15posts)
လစာ (၂၀၀၀၀၀ မှ ၂၅၀၀၀၀ကြား ပေးမည်။ )
အသက် (25 ) နှစ်အောက် ၊ ဘွဲ့ရ့ဖြစ်ရမည်။
ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
အပင်ပန်းခံနိုင်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ်မှု ရှိရမည်။
Word , Excel , Powerpoint အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Phone နှင့်ပတ်သတ်သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
အထက်ပါ လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position များအတွက် E mail ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင်၎င်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ်စာ နေရာ (၁) ။ ။Myanmar Professional Training Centre @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ အမှတ် (၂၉)၊ပထမထပ်၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
((((((((((((((URGENT POSITION ))))))))))))))) GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Trainer Male(8Posts) 1.အသက်(၂၅နှစ်)အောက်ဖြစ်ရမည်။ 2.English စကားအသင့်အတင့်ပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ 3.ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ရမည်။ 4.ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ 5.သွက်လက်ထက်မြက်ပြီး စကားပြောကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ 6.အပင်ပန်းခံနိုင်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ်မှု ရှိရမည်။ 7.Computer (Word,Excel,Power point) အသုံးနိုင်ရမည်။ *(သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်) *(နယ်ခရီးထွက်နုိင်သူဦးစားပေးမည်) အထက်ပါ လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position များအတွက် Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone No.-09-262223783 ,09-970539386, 09 262223785 ရုံးလိပ်စာ (၁) - တိုက်အမှတ်(၆) ၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၄)၊ အင်ကြင်းမြိုင်အိမ်ရာ ၊ ဗိုလ်ချို(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ရုံးလိပ်စာ (၂) – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။